Fampiharana maimaim-poana 3 hanombohana ny herinandro amin'ny fanantenana | Vaovao IPhone
Fampiharana maimaim-poana 3 hanombohana ny herinandro amin'ny fanantenana
Manomboka ny herinandro vaovao ary hahatonga anao tsy ho sarotra aminao kokoa ny manomboka amin'ny Actualidad iPhone izay itondranay anao lalao sy fampiharana maimaimpoana telo Fotoana voafetra.
Tadidio fa ny vanim-potoana tolotra dia misy daty lany daty. Izahay dia afaka manome toky ny maha-marina azy io amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity fa tsy avy eo. Noho izany, ny torohevitray dia ny mampidina azy ireo haingana araka izay tratra mba hahazoanao tombony amin'ny fihenam-bidy. Andao ho any!
1 Feo mihetsika: Feo amin'ny hafatra
3 Ny Lalao Bridge
Feo mihetsika: Feo amin'ny hafatra
Manomboka amin'ity fampitaovana lehibe ity isika izay efa milaza ny zava-drehetra ny anarany. Misaotra ny «Feo Mavitrika» azonao atao ny manakana ny fanoratana amin'ny fitendry ary ampiasao ny feonao handefasana hafatra amin'ny Telegram, WhatsApp, mailaka, mandidy Notes ary maro hafa. Ho fanampin'izay, manana fanohanana amin'ny fiteny 32 izy, mamela anao handika ny lahatsoratra amin'ny paompy iray fotsiny ary mampiditra fanitsiana mandeha ho azy.
Ny "Active Voice: From Voice to Text" dia misy vidiny mahazatra € 10,99, nefa izao dia azonao atao maimaim-poana tanteraka izany. Aza very io vintana io!
Feo mihetsika!€ 9,99
Ny faharoa amin'ireo fisoratana anarana maimaim-poana anio Alatsinainy dia ny "Zoom Recorder", fampiharana horonantsary ahafahanao manakaiky ny 16x zooming ary mivoaka ny sary amin'ny fotoana tena izy eo am-panoratana horonantsary amin'ny kalitaon'ny FULL HD amin'ny 1080p.
Izy io dia rindranasa tsotra sy mora ampiasaina, mifanentana amin'ny iPhone sy iPad, amin'ny endriny saripika na sary, ary manome sary maranitra noho ny teknolojia fifantohana mandeha ho azy. Ary ny horonan-tsary dia tehirizina mivantana ao amin'ny app Photos amin'ny iPhoneo, toy ny mahazatra.
"Zoom Recorder" dia misy vidiny mahazatra 1,09 €, nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka izao. Aza very io vintana io!
Zoom Recorder€ 0,99
Ny Lalao Bridge
Ary mifarana amin'ny "The Bridge Game" izahay, lalao iray izay hahatonga anao ho mpanamboatra tetezana. Amin'ny alàlan'ny haavon'ny fahasarotana 40 dia tsy maintsy manamboatra tetezana ianao mihoatra ny renirano, ny arabe, ny lohasaha sy maro hafa, misafidy ireo fitaovana sy teknika mety indrindra hahazoana antoka fa mahazaka ny fivezivezena isan'andro ny tetezanareo.
"The Bridge Game" dia manana vidiny mahazatra 1,09 €, nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka izao. Aza very io vintana io!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Fampiharana maimaim-poana 3 hanombohana ny herinandro amin'ny fanantenana
Victor Manuel dia hoy izy:
feo mavitrika? fa ny keyboard IO kosa tsy manao an'izany intsony
Valiny tamin'i Victor Manuel
feo mavitrika? fa izany dia tsy mbola manao ny klavian'ny iO?
Eny. Amin'ny ankapobeny, ny safidy Dictation na izany aza, ny fahombiazan'ny iray sy ny iray hafa dia ho hafa. Total, raha maimaim-poana ianao dia afaka manandrana ary hahagaga anao izany. Ary raha tsy izany dia esory izany ary manohy amin'ny Dictation iOS
Tsy mandeha amin'ny ios11 ny Game Bridge
Andao hojerentsika raha mametraka ny batterie ny developer. Raha tsy izany dia hijanona fotsiny izy io raha tsy miasa amin'ny iOS 11
Charger Wireless Wireless tsara indrindra ho an'ny iPhone 8, 8 Plus, ary iPhone X
Ny volan'ny iPhone 8 sy ny iPhone 7 mifanatrika, efa nihatsara ve?